Runako Archives - Tamban RELAY
Maitiro akanaka Deredza uremu pakutengeserana Zvirongwa zvemasikirwo Zvepabonde uye hukama kutarisira
Cameroonia Imane Ayissi ndiye wekutanga mugadziri we sub-Saharan Africa Africa ku parade vhiki rega ...
Yakavakirwa muParis kwemakore makumi matatu, Cameroonia Imane Ayissi akaita nhoroondo yemafashoni muna Ndira 23 nekuve wekutanga gadzira kubva kuSahara yeSahara Africa kuzoratidzira kuParis Haute Couture Vhiki. Kuzvarwa…
Bvudzi reAfrica rinodzoreredzwa ne ANGE EKA
Anozivikanwa nemweya wake wekutenda uye kufungidzira, muimbi anowanzo kutsanangurwa seakasimukira uye achinyanyisa. Uye sezvaanoisa kwazvo, akafunga kuita vhudzi, izvo zvaari kuda. Mutumwa EKA, ...
5 mafashoni mafashoni iwe unofanirwa kunyatsotevedzera
bryamangwanabe Nyamavhuvhu 12, 2020 0
5 mafashoni mafashoni aunofanira kutevera Isu takasarudza mafashoni mashanu maitiro aunofanira kunyatsoitevera kuti uve nemafashama anotaridzika zhizha rino. Tese tine zvido muhupenyu! Vamwe vateveri ve ...
ALEXIS WAYAN Nyamavhuvhu 1, 2020 0
William Franklyn Miller achiri kuyaruka anoita kuti vasikana vadiki varote. Iye ane maziso ebhuruu uye bvudzi raunoda kumhanya neminwe yako. William Franklyn Miller akaberekwa munaKurume 25, 2004 muLondon. Uyu mukomana akanaka anogara ...
Zvinhu gumi zvekuziva nezveSouth Africa Zozibini Tunzi, Miss Universe 2019.
ALEXIS WAYAN Juil 27, 2020 0
Zvinhu gumi zvekuziva nezveSouth Africa Zozibini Tunzi, akasarudzwa Miss Universe 2019 Pave nemakore makumi maviri nematatu, South Africa yakagadzwa Miss Universe 26 pamhemberero yegore negore yakaitwa muAtlanta (United States) muna Zvita 2019 . Iye…
RACISM: yepamusoro modhi KUGARA JHONSON ANOTAURA HER WorkST EXPERIENCES.
ALEXIS WAYAN Juil 22, 2020 0
Kutukwa, dziva rakadzingwa mushure mekugezera mariri: Beverly Johnson anga ane zviitiko zvinotyisa zveusori. Iye anoramba ari piyona akabvumira mamwe makuda maonline kuti atariswe uye ...
Heano maitiro ekuchengetedza zvigadzirwa kunyange ne masks ekudzivirira
bryamangwanabe Juil 16, 2020 0
Heano maitiro ekuchengetedza chigadzirwa chako kunyange ne masks ekudzivirira Ine nemasks ekudzivirira edu ekugadzira-kutarisa ... Tora matipi akati wandei ekuvachengeta vari munzvimbo zuva rese! Zvakanaka, isu ...
Hedzino mhando dzekushambira dzakagadzirirwa iwe zvichienderana nechako chiratidzo chekuyeuka
bryamangwanabe June 30, 2020 0
Heano marudzi emhando yekushambira akagadzirirwa iwe zvichienderana neako chiratidzo chesaredzi Mwaka uno wekuti isu uone kuti ndeipi mhando yekushambira yakagadzirirwa iwe zvichienderana nechiratidzo chako chekuyeuka! Nyeredzi…
Zalando anokwidza giya nekutengesa eco-anotungamira mhando na2023!
Iyo Zalando online yekutengesa chikuva chiri kusimudza giya kana zvasvika kune ecology. Yechokwadi inofanirwa-kuve mune yefashoni yepamhepo, iyo yakawanda-brand saiti Zalando iri kuita shanduko yayo yezvisikwa. Kunyangwe iyo…